Gonzalo Higuain Oo Magacaabay SADDEXDA Xiddig Ee Ugu Fiican | Axadle | Wararka Africa
The hunt for Tigrayan leaders begins when Ethiopia declares victory
the forgotten victims of the rapes committed in Lubumbashi Prison
Gonzalo Higuain Oo Magacaabay SADDEXDA Xiddig Ee Ugu Fiican
By Abdiwahab Ahmed	 On Nov 18, 2020
Weeraryahanka reer Argentina ee Gonzalo Higuain ayaa magacaabay saddexda ciyaartoy ee ugu wanaagsan dunida waqtigan, waxaanu meeliska dhigay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo aanu kusoo darin liiskiisa.
Edinson Cavani Oo Wajahaya Ganaax Seddex Kulan Ah Ka Dib
Gonzalo Higuain oo waqtigan u ciyaara kooxda Maraykanka ka dhisan ee Inter Miami ee uu iska leeyahay David Beckham oo uu ku biiray xagaagii, ayaa waxa uu ka mid yahay 13 ciyaartoy oo nasiibku siiyey inay ka garab ciyaaraan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi labadaba.
Labadan ciyaartoy oo 11 sannadood iska bed-bedelayay abaal-marinta xiddiga caalamka ugu fiican ee Ballon d’Or oo Messi uu hantiyey lix jeer, shanta kalena uu Ronaldo qaatay ayaa hoos u dhac laga dareemayaa xili ciyaareedkan iyo midkii ka horreeyeyba.
Inkasta oo ay wali yihiin xiddigaha loogu hadal haynta badan yahay, haddana Gonzalo Higuain waxa uu sheegay in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo aanay ahayn xiddigaha maanta ugu fiican dunida, balse ay jiraan laacibiin kale oo ka sarraysa.
Isaga oo la hadlayay telefishanka ESPN, ayaa Gonzalo Higuain la weydiiyey saddexda ciyaartoy ee ugu wanaagsan waqtigan la joogo, waxaanu ku jawaabay: “Waqti xaadirkan, aniga waxay ila tahay, inay ugu wanaagsan yihiin Lewandowski, Haaland iyo Benzema. Benzema wuxuu halkaa joogay waqti dheer oo 12 sannadood ah oo uu figta sare joogay.
“Lewandowski, waa ciyaartoy, dhaliye iyo guuleyste. Haaland waa ciyaartoy wanaagsan oo soo baxaya, mustaqbal weyna leh. In badan ayuu aniga iga yaabiyey, waa weeraryahan aad u wanaagsan.”
Higuain oo kar kale la weydiiyey weeraryahannadii ugu wanaagsanaa jiilkan ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu soo qaado labadan ciyaartoy ee sare, waxaanu yidhi: “Taariikhda, waxaynu ku haysanaa Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa, Ibrahimovic. Laakiin weeraryahanka ugu wanaagsan markaynu ka hadlayno, waa midkii hibada lahaa ee Ronaldo Nazario. Mar walba waxaan doonayay inaan Ronaldo noqdo, mar walbana waxaan isku dayi jiray inaan xirfaddiisa soo minguuriyo.
Xiddigan reer Argentina ayaa intaas kaddib si toos ah loo weydiiyey aragtidiisa Lionel Messi, waxaanu yidhi: “Waa mucjiso. Wax kasta (ciyaartiisa) waa dabiici. Sidan ayuu u dhashay, dhiiggiisa (DNA) ayay ku jirtaa, wax kasta dedaal la’aan ayuu ku sameeyaa. Dadku wax kasta way u dagaallamaan, laakiin Leo isaga waa dabiici, taas ayaa ka dhigtay mid gaar ah.”
Ethiopia freezes financial institution accounts for company TPLF financing
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaallib
After his great victory, President Kaboré faced the…
Qoor-Qoor oo bilaabay dadaallo uu ku dhexdhexaadinaya DFS…
TODDOBA Ciyaartoy Oo Ka Dhaawacan Manchester United Ka…
After his great victory, President…
Trump oo Biden uga aarsanaya Ciidan ka…
Qoor-Qoor oo bilaabay dadaallo uu ku…